Danang dia mitady fifangaroana tsena fizahan-tany tsara kokoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Vietnam » Danang dia mitady fifangaroana tsena fizahan-tany tsara kokoa
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Vietnam
Tamin'ny Jolay 25th 2019, ao amin'ny St. Regis Hotely Mumbai, Danang Ny Departemantan'ny fizahan-tany miaraka amin'ny Bangkok Airways dia nikarakara fampisehoana Danang fizahan-tany mba hampiroborobo ny vokatra sy serivisy fizahan-tany Danang amin'ny tsena indianina ary koa hampifandraisina ireo orinasam-pizahantany sy ireo mpanomana mariazy any Danang sy India. Ity programa ity dia notanterahina tao anatin'ny drafitra fanasamihafa ny tsenan'ny fizahan-tany iraisan'ny tanàna izay nankatoavin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana mandritra ny taona 2019-2020.
Ny hetsika dia niarahaba ny fanatrehan'Atoa Tran Xuan Thuy - ny konsul jeneraly vietnamiana any Mumbai, India; Andriamatoa SudhirPatil - Mpanorina sy talen'ny Veena World, iray amin'ireo masoivohon'ny fizahan-tany Indiana ambony ary filohan'ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany Maharashtra (MTOA); miaraka amin'ireo mpikambana MTOA ary vahiny manan-kaja 72. Raha niresaka tamin'ity hetsika ity Andriamatoa Tran Xuan Thuy dia nanantitrantitra ny mety ho fisian'ny fizahan-tany Danang, tanàna be mpividy indrindra any Vietnam ka hatrany amin'ny tsenan'ny India.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Danang dia nahita fifangaroana tsena tsy voalanjalanja eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary nitady tsena vaovao mety hitranga. Ny fandaharana fampisehoana fizahan-tany Danang ao Mumbai dia fotoana iray ahafahan'ny tanàna manavaka ny zava-bitan'izy ireo ary mivelatra amin'ity tsena goavana ity. Miaraka amin'ny 4.5-ora Mumbai - sidina mivantana Bangkok ary sidina 2 ora avy any Bangkok mankany Danang, Bangkok Airways dia manome fahafaha-manao tsara hampifandray ny tanàna lehibe indrindra any India mankany Danang. Tena nankasitraka an'i Danang ireo mpandray anjara ary naneho ny fanirian'izy ireo hitondra hetsika avy amin'ny toerana malaza hafa toa an'i Phuket sy Bali mankany Danang. Ho an'ny tsena indianina, ny vahinin'ny fialamboly dia mahatratra 40% ny mpitsidika rehetra, 40% ny mpizahatany MICE ary ny 20% mpizahatany fampakaram-bady. Ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia mbola tsy nankany Danang ary ity dia fotoana iray hahafahan'izy ireo mijery akaiky ny toerana sy ny fotodrafitrasa ary ny serivisy an'ity tanàna amorontsiraka ity.
Andriamatoa Cong Nghia Nam, talen'ny varotra ny Ariyana fizahan-tany fizahan-tany, izay misy ny Furama Resort Danang, Furama Villas Danang, Ivotoerana Ariyana Convention Center ary ny Ariyana Beach Resort sy Suites Danang manan-danja 1,450 izay kasaina hisokatra amin'ny faran'ny taona 2020 dia nanao lahateny hoe: mety ho tsenan'i India, nanao drafitra fandraharahana hanakaiky an'ity tsena ity izahay taorian'ny herinandro Herinandron'ny mpitarika ara-toekarena APEC 2017 izay natao tao amin'ny Ariyana Convention Center tamin'ny Novambra 2017. Nanangana birao solontena ofisialy any India izahay ary nandray anjara tamin'ny hetsika lehibe natao hampiroborobo ny fizahan-tany Vietnam sy Danang mankany amin'ny tsena indiana, ao anatin'izany ny fampiantranoana FAM Trips avy any India, ny fikarakarana ny Herinandron'ny nahandro indianina ary ny fifanakalozana kulinarina vietnamiana any India ary koa ny fampiasana ireo chef karana mba hiantohana ireo lovia indianina hitahiry ny tsiro nentin-drazana. ”
”Nahazo fiheverana manokana ihany koa izahay avy amin'ireo mpikarakara ny fampakaram-bady Indiana sy ireo orinasa MICE satria mihevitra fa matetika ny olona Indiana dia mivezivezy amin'ny vondrona lehibe hatramin'ny 500 ka hatramin'ny 1,000 ny vahiny. Ho fanampin'izany, ny orinasan-tsena indiana amin'ny indostrian'ny fanafody, teknolojia, famatsiam-bola ary ny banky - ireo sehatra indostrialy indiana lehibe koa dia naneho ny fahalianany hikarakara ny hetsika any Danang. ”, Hoy hatrany i Cong.
Andriamatoa Minnat Lalpuria - Mpanorina sy Tale jeneralin'ny Vachan, masoivohon'ny hetsika indianina malaza dia nilaza hoe: “Tena mampiaiky volana anay ny tontolon'i Danang miavaka sy ny rafitra fampiantranoana isan-karazany. Tena handinika hetsika mifindra avy any amin'ny toerana mahazatra toa an'i Thailand sy Indonezia ka hatrany Danang izahay. ”
Araka ny nambaran'Andriamatoa Nguyen Duc Quynh - filoha lefitra ao amin'ny komity mpitantana ny Asan'ny Hotely Danang: "Mikasika ny fifangaroan'ny tsenan'ny fizahan-tany any Danang manokana ary Vietnam amin'ny ankapobeny, dia tsena 1 na 2 ihany no iankinanay. Ny fanitarana mankany India no vahaolana tsy azo ihodivirana hahafahana mandanjalanja ny fifangaroan'ny tsena. Miaraka amin'ny mpanjifa marobe mety ho avy any India, mino aho fa ho vitanay ny hamaha ity olan'ny fizahan-tany fizahan-tany any Danang ity ».
Nambaran'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) fa eo amin'ny 50 tapitrisa eo ny mpizahatany karana mivezivezy any ampitan-dranomasina ary Vietnam dia firenena tsy azo ovaina. Rehefa nahalala ny fahafaha-manao goavana avy amin'ity tsena ity izy, dia mampiroborobo ny sariny amin'ireo mpanjifa indiana i Danang amin'ny alàlan'ny hetsika lehibe toy ny fandraisana ny filohan'ny HE India India Ram Nath Kovind sy ny Lady First mandritra ny fitsidiham-panjakana tany afovoan-tanànan'i Danang tamin'ny novambra 2018, nampiantranoin'ny Governemanta Vietnamese ao amin'ny lapan'ny Convention International Furama; mikarakara ny fifanakalozana culinary eo amin'ny firenena 2 sy ny fampiantranoana dia lavitra FAM Indiana hahafantarana ireo vokatra fizahan-tany ao an-tanàna. Antenaina ihany koa fa ny sidina mivantana eo anelanelan'ny Danang sy India dia hovonoina amin'ny fotoana ho avy. Ankoatr'izay, ny tanàna dia hivoatra sy hanatsara ny fotodrafitrasa mba hisarihana mpitsidika karana bebe kokoa. Ny fampiroboroboana an'i Danang ho firenena faharoa be mponina indrindra eto an-tany miaraka amina olona 1.31 miliara no ho vahaolana handanjalanjana ny fifangaroan'ny tsena fizahan-tany ho an'ny tanàna misy olona mendrika indrindra ao Vietnam.